Xubintii Ciyaaraha: Man City calankaa u lulan laakiin illaa intee? (dhegayso) – Radio Daljir
Xubintii Ciyaaraha: Man City calankaa u lulan laakiin illaa intee? (dhegayso)
Janaayo 20, 2018 1:46 b 0
Waxaa la ciyaari doona kulamadii 24 aad ee horyaalka dunida ugu xiisaha badan, waa Premier League-ga dalka Ingiriiska. Kooxda hoggaamineysa horyaalka ayaa rajo weyn ka qabta in ay jidka guusha dib ugu soo laabato, waa Man City e hadde ogow, oo 23 ciyaarood oo illaa iyo hadda la ciyaarey haysata 20 guulood (W), 1 lumid (L), iyo 2 barbardhac ah (D).
Tababaraha Man City Pep Guardiola oo ka hadlay sababta aysan u saxiixin Alexis Sanchez ayaa ku macneeyey in saxiixa Sanchez uu ka doortay iskuduubnaanta kooxdiisa Man City oo aysan marnaba macquul aheyn waqtigan hadda in dusha la saarto mushaar intaas le’eg. Pep ayaa hambalyo u diray Alexis Sanchez iyo kooxdiisa cusub ee Man United.
Hadaba saadaasha iyo su’aashuba waa illaa waqti intee le’eg bay José Mourinho iyo United ku qaadaneysaa in ay City calanka u siibaan, oo kooda saartaan?
Tababaraha kooxda Mancheter United ayaa ballanqaad u sameeyay ciyaaryahanka kooxda Real Madrid ee Gareth Frank Bale, waa se haddiiba u ku soo biiro kooxdiisa.